विमान डिले काण्ड : माफी मागेर सम्यमित हुनु भो,अब ढिलो गर्नु हुन्न । - jagritikhabar.com
जीवन अर्याल :-
धेरै नेपालीले आशा गरेको ब्यक्ती । तिम्रो पार्टिमा नेता मन पर्छ यि यि नेता भनेर अन्य पार्टिमा आस्था राख्ने साथिहरुले सबैभन्दा पैले योगेश भट्टराई भन्थे (भन्छन्) । यस्तै घटनाले खारिन सिकाउछ । अनि पाईला पाईलामा काडा हुन्छन ,नदेखिने काडा भन्ने सिकाई पनि हो । जस्लाई सकरात्मक नै मान्नु पर्छ ।
ज्ञानेन्द्र जीलाई पनि मज्जैले चिनियो । यो घटनाले सामाजिक अभियान्ता हु भन्नेहरुले पनि धेरै सिक्नु पर्ने देखियो । एकै छिनको वाई वाईले हाम्रो नेपालमा अहो भन्ने हुन्छ । थोरै गलत हो भन्ने बित्तिकै भो भो भनिहाल्छौ हामी नेपाली ।
कस्तो हतार ज्ञानेन्द्र जी हजुरलाई कमेन्ट र लाईक बटुल्न । साच्चिकै हजुरले भने जस्तै हतार भाको थियो भने । मन्त्री ज्यु आईसकेपछी प्लेन भित्रै भाडोभैलो किन ? यदी साच्चिकै हजुर अभियान्ता हुनुहुन्थ्यो भने प्लेन उडेर काठमाण्डै आइसके पछी बिरोध गर्न सक्नु हुन्थ्यो । तपाईको कारण थप ३० मिनट ढिला भाको पानी परेपछिको आकास खुलेझै छर्लङ छ ।
ढिला भो । सकियो । तर प्लेनभित्र घेरेर हुलहुज्जत गर्नु ठिक हो त ? कि यस्तै चाहेको हो ? अझ त्योपनि रेकर्ड गरेर हिरोइज्म देखाउनु ठिक हो ? बचाउ गरिएको होइन । तपाईको व्यवहार प्रती असहमति हो ।
“तेस्को बाऊको पिलेन हो” ? “रामधुलाई गरीयो ” ? “पारसका बिरुद्ध हस्ताक्षर बुझाउने तैँ हैनस” ? यी तिन वाक्य नबोलेको भए जनताको स्वस्थ प्रतिपाद हो क्यारे भनेर म चै चुप बस्थे । योजनाबद्द ढङ्गले विमान भित्रै अपमान जनक व्यवहार गरेको देखियो। प्लेन डिले भएको कारण नै नबुझी हिरोइजम देखाउने सवैलाइ फटाहा देखाएर आफु हिरो देखिन खोजेको प्रस्ट हुन्छ।
सरकारको गलत कार्य विरुध्द खवरदारी गर्नु उचित नै हुन्छ, खवरदारी गर्नु नागरिकको कर्तब्य पनि हो। तर खवरदारी गरेको वहानामा अराजक भएर प्रस्तुत हुन पर्ने कारण केहो?
पर्खिनु एयरलाइन्सको समस्या हो । छोडेर पनि हिंड्न सक्थ्यो । पैले नै प्लेनलाई दबाब किन दिनु भएन ? योगेश भट्टराई छिर्ने बित्तिकै एक्कासी इनर्जी आयो है ? एयरपोर्टका अनुसार ६:११ मा ल्याण्ड भएको जहाज त्यत्रो बवाल गर्दा समेत ७:०६ मा उड्यो । ५५ मिनेट जहाज एयरपोर्टमा बस्यो । मन्त्री ज्यूले १५ मिनेट ढिलो भएको स्वीकार्य गर्नु भयो । १ घण्टा ढिलो गराए भन्ने हल्ला गर्नुभो हजुरको भागमा कती समय पर्यो हिसाब गर्नु त ?
ब्यक्ती सम्मानित नभए पनि पद त सम्मानित हुनुपर्थ्यो ? गल्ति गर्नेलाई विधिले बांध्ने हो निषेध गर्ने होइन।?